Inguqulo yesithathu ye-beta ye-Android 12 isivele ikhishiwe | Kusuka kuLinux
Okuhle | | Android
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule i-Google imemezele ukukhishwa kanye nokuqala kokuhlolwa kwenguqulo yesithathu ye-beta i-Android 12 kanye ne izinguquko ezinkulu esingazithola Uma kuqhathaniswa nenguqulo yesibili ye-beta, isibonelo, i- ikhono lokwenza ukumboza izithombe-skrini hhayi kuphela indawo ebonakalayo, kodwa futhi okuqukethwe endaweni yokupheqa.
Olunye ushintsho olugqamile kule nguqulo yesithathu ye-beta yi- ikhono lokugcina okuqukethwe kusendaweni ebukekayo esebenza kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa isigaba se- "View to render" ukuxhasa ukuskrola izithombe-skrini ezinhlelweni ezisebenzisa i-interface ethize, kuphakanyiswa i-ScrollCapture API.
Isakhiwo sifaka phakathi injini entsha yokusesha ephezulu ye-AppSearch, ekuvumela ukuthi ukhombe imininingwane kudivayisi yakho futhi wenze ukusesha okugcwele kombhalo ngemiphumela yokuma. I-AppSearch inikeza izinhlobo ezimbili zezinkomba: ukuhlela ukusesha kuzinhlelo zokusebenza ngazinye nokusesha lonke uhlelo.
I-API ingezwe esigabeni seWindowInsets ukuthola indawo yokubonisa yezinkomba zokusetshenziswa kwekhamera nemakrofoni (izinkomba zingagqokisa izilawuli ezinhlelweni ezigcwele-skrini nange-API ebekiwe, uhlelo lokusebenza lungalungisa i-Interface yabo).
Ngaphezu kwalokho, kuqokonyiswa nesici samadivayisi alawulwa maphakathi ukukhubaza ukusetshenziswa kwamaswishi ukuthulisa imakrofoni nekhamera.
Yesikhwama se-CDM (Companion Device Manager) izinhlelo ezilawula amadivayisi ahlobene nama-smartwatches nama-tracker wokuqina, yikhono lokwethula izinsizakalo ezisebenzayo (ngaphambili).
I- ukujikeleza okuzenzakalelayo okuthuthukile kokuqukethwe kwesikrini, lokho manje ingasebenzisa ukubonwa kobuso yekhamera engaphambili ukuthola ukuthi ingabe isikrini sidinga ukuzungeziswa yini, isibonelo, uma umuntu esebenzisa ifoni elele phansi. Ukuqinisekisa imfihlo, imininingwane icutshungulwa endizeni ngaphandle kwesigcini sesithombe. Isici okwamanje sitholakala kuphela ku-Pixel 4 nakuma-smartphone amasha.
Ngakolunye uhlangothi ukugqwayiza kwenzelwe ukujikeleza kwesikrini, eyehlise ukubambezeleka ngaphambi kokujikeleza cishe ngama-25% futhi ingeze i-API yemodi yomdlalo nezilungiselelo ezihlobene ukulawula iphrofayili yokusebenza womdlalo; ngokwesibonelo, ungadela ukusebenza ukunweba impilo yebhethri noma usebenzise zonke izinsiza ezikhona ukufeza i-FPS ephezulu.
Olunye ushintsho ukuthi lungeze ukudlala-njengoba-wena-ukulanda ukulayisha amafa wegeyimu ngemuva ngesikhathi sokufakwa, kukuvumela ukuthi uqale ukudlala ngaphambi kokuthi ukulanda kuqede.
Futhi, NgoJulayi i-Android Security Patch Ikhishwe, ukuthi ilungisa ukukhubazeka okungama-44, kokungu-7 kukalwe ngokugxeka kanti okunye kuphezulu. Izinkinga eziningi ezibucayi zivumela ukuhlaselwa okukude ukwenza ikhodi yabo ohlelweni. Izinkinga ezimakwe njengeziyingozi zivumela ikhodi ukuthi isebenze kumongo wenqubo enenhlanhla ngokukhohlisa izinhlelo zokusebenza zasendaweni.
Ukuba sengozini okubucayi kwe-6 kuthinta izingxenye eziphathelene neziphuthi zeQualcomm kanye nemodyuli yeWidevine DRM (ukugcwala kwebhafa lapho kucubungulwa okuqukethwe okuvela eceleni). Ngokwengeziwe, ukuba sengozini kungabonwa ku-Android Uhlaka, i-Android Media Uhlaka kanye nezinto zesistimu ye-Android ezikuvumela ukuthi ukhuphule amalungelo akho ohlelweni.
Ekugcineni, kulindeleke ukuthi kwethulwe uhlobo olusha lwe-Android 12 uma konke kuhamba kahle, lokhu kuza ngekota yesithathu yalo nyaka ka-2021.
Mayelana ne-firmware iyakha Ilungiselelwe kusuka kule nguqulo yesithathu ye-beta ye-Android 12, okwamanje iyatholakala ngePixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a / 4a 5G nePixel 5, kanye nakwamanye amadivayisi we-ASUS , OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Transsion, Vivo, Xiaomi neZTE.
Uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho, ungaxhumana nemininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » Inguqulo yesithathu ye-beta ye-Android 12 isivele ikhishiwe